Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Kubvumbi 30, 2021
Mutongi wedare repamusoro, VaTawanda Chitapi, vanoti vachapa mutongo wavo nemusi weChipiri pachikumbiro chemumiriri weHarare West muNational Assembly, Muzvare Joana Mamombe naMuzvare Cecilia Chimbiri, chekuti vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutongo uyu wanga uchifanirwa kupihwa nhasi.
MDC – T inoita musangano kuMatabeleland South wekuzivisana nevatsigiri vayo pamwe nekuzeya nzira dzekuwedzera mavhoti mudunhu iri kuitira kuti panozoitwa sarudzo, bato iri rinenge riine vatsigiri vakawanda.
Zimbabwe Statistics Agency, Zimstat, inoti mari inodiwa nemhuri yevanhu vashanu pamwedzi yakakwira mumwedzi waKubvumbi kuenda pamadhora zviuru makumi maviri nezvisere zvine mazana matatu nemakumi matanhatu emari yemunyika (ZWL$28 362.00), kubva pamadhora zviuru makumi maviri nezvitanhatu nemazana mashanu ane makumi matanhatu (ZWL$26 560.00) muna Kurume.
Hurumende yokomekedza makambani ari kuda kutenga mishonga yenhomba yeCovid-19 yekubaya vashandi vawo pamwe nemhuri dzavo kuti atenge chete nhomba dziri kushandiswa munyika dzeSinovac neSinopharm dzakagadzirwa kuChina.
Vagari vekuBikita vogara vachityira hupenyu hwevana vavo vadiki zvichitevera kuwanda kwenyaya dzevana vari kuurayiwa nechinangwa chekuchekeresa vana ava.
Sangano rePremier Soccer League rinoti riri kuunganidza vanhu vachabatsira zvikwata zvenhabvu kutevera zvinodiwa pakudzivirira chirwere cheCovid 19 mugadziriro yaro yekudzoka kwemitambo yenhabvu munyika.
Muchirongwa cheLiveTalk na8pm tiri kutarisa zvinhu zvakawanda zvakatarisana nenyika zvinoda kugadziriswa.